Ny loko tiorka ao Seychelles indray
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Seychelles » Ny loko tiorka ao Seychelles indray
miverina amin'ny seychelles ny seranam-piaramanidina turkish
Niverina tany amin'ny morontsirak'i Seychelles ny Turkish Airlines, nidina tany paradisa ny marainan'ny zoma 23 aprily 2021.
Fiaramanidina Tiorka A330-300 avy any Istanbul mitondra mpandeha 171 noarahabaina tamina rano nentim-paharazana tany Seychelles.
Ny fizahan-tany Seychelles dia mifantoka amin'ny faritra atsinanana sy afovoany Eropa.
Ny zotram-pitaterana dia hitondra mpandeha any amin'ireo nosy indroa isan-kerinandro, ny talata sy zoma.
Ny fandefasana ny serivisy mpandeha iraisampirenena azo antoka COVID, ny fiaramanidina Tiorka A330-300 avy any Istanbul mitondra mpandeha 171 dia noarahabaina tamina rano nentim-paharazana rehefa tonga tany amin'ny Ranomasina Indianina.
Mandray anjara amin'ny famelomana indray ny indostrian'ny fizahan-tany eo an-toerana, mifandray ilay zotram-piaramanidina Seychelles miaraka amin'ireo faritra Eoropa Afovoany sy Atsinanana, izay nanjary zava-dehibe indrindra amin'ny tanjona aleha satria maro amin'ireo tsena nentin-drazana no mijanona eo ambany fikatsoana.
Nanatrika ny seranam-piaramanidina ny fahatongavan'ny sidina Turkish Airlines, ny Lehiben'ny Executive an'ny Seychelles Tourism Board, Ramatoa Sherin Francis, dia naneho ny hafaliany hahita ny lokon'ny mpitatitra niverina tany Seychelles.